Ny vanim-potoana amin'ny Archives Anti-Christ - Manisa ny Fanjakana
Category Archives: Ny vanim-potoana amin'ny Anti-Kristy
St. John Henry Newman - Tsy mitovy ny fotoantsika
Sary mahazatra amin'ny fotoana farany…
Maninona isika no tsy afaka mandray "ilay sambo."
Luz de Maria eo amin'ny microchip…
Faminanian'i Isaia momba ny kominista manerantany
Ny fitomboan'ny jadona eo alohan'ny fotoanan'ny fiadanana.
Antikristy… Talohan'ny fotoan'ny fiadanana?
Hersy sa hadisoana?
Gisella Cardia - Ny fiandohan'ny Apokalipsy!
Ny Antikristy izay hanambara ny tenany tsy ho ela.
Fampitandremana tamin'ny lasa…
Gisella Cardia - Tsy ho ela, tsy ho ela
Ho avy ny hazavana…
Pedro Regis - Maro no hamoy ny finoana
Betsaka no hanao fanekena amin'ny fahavalo.
Vavinay: miomàna - Fizarana III
Amin'ny lafiny sasany, toa efa nanomana 25 taona tamin'ity fanoratako ity aho…
Jennifer - Akaiky ny Antikristy
Hoy Jesosy: Izany no antony ilazana ny fifohazana hatrany sy ny fiambenana fa efa antomotra ny antikristy. - 16 Desambra 2003